ဒီရထားခရီးသွားလာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒါဟာအများအပြားရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်သူမျှသံသယရှိပါတယ်. ရိုးရိုးသားသား, အကြင်သူသည်ရထားကအခွင့်အလမ်းခရီးသွားလာပေးထားရဲ့ကကျော်ရှင်းရှင်းအရူးသွားလေ၏! အဘယ်ကြောင့်? ကခမ်းနားင်သောကြောင့်! အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလေယာဉ်စီးဆန့်ကျင်, ကားဖြင့်ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်သို့မဟုတ်လမ်း-လွန်း-တာဝန်ရှိစီးမသက်မသာ, ရထားခရီးဖြစ်ပါသည် လုံခွုံသော, အမြန်ပေမယ့် မယုံနိုင်လောက်အောင်ချစ်စရာကောင်း နှင့်ရင်ခုန်စရာ. တဦးတည်းရထားခရီးသွားလာဗာဂျီးနီးယား Woolf ပျက်ကွက်စိတ်နှင့်ကျြမှောကျခတျေအလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုမှန်ကန်ရောနှောကြောင်းငြင်းခုန်စေခြင်းငှါ,. ah, သငျသညျပြီးသားကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့မြင်ပါလိမ့်မယ်.
ငါတို့သည်သင်တို့ Ethan Hawk ကြောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်အာမခံချက်မပေးနိုငျ – သင်ပထမဦးဆုံးပေါ်ဂျူလီ Delpy ရထားခရီးအခွအေန ရထားစီးနင်း (Oh, လာစမ်းပါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်မြင်ကျော် swooned င့် Trilogy မီ, လြှို့ဝှကျစှာ, ကျနော်တို့အတူတူချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပျက်ရှိသည်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်။) သင့်ရဲ့ shell ကိုထဲကခြိုးဖကျြမြားနှငျ့အတှေ့အကွုံပေါ်ပေါက်ပါစေ. ဘယ်နှစ်ယောက်အသိဉာဏ်, ရတာဟာ, ပျော်ရွှင်စရာစကားပြောဆိုမှုများကိုသင်ရပါလိမ့်မယ်? အဆိုပါအတွေ့အကြုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၏လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ရတဲ့တစ်စိတ်ကူးခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်! သငျသညျမည်မျှလှပသောသိဘယ်တော့မှမ သငျသညျတညျဆောကျပါလိမ့်မယ်မိတ်, မည်မျှနှိပ်စက်သငျသညျရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တွေ့ပါမယ်မည်မျှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး. သငျသညျလညျးအရှက်မရတယ်ဆိုရင်, သင်စိတ်ဝင်စားသည့်ရေခဲကိုချိုးဖျက်နှင့်လူစကားပြောဖို့ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းဖြစ်.
အုပ်စုများအတွက်ခရီးသွားလာ နှင့်အထူးနေ့ရက်ကာလ၌ ရထားလက်မှတ်ဘို့သိသိသာသာစျေးနှုန်းလျော့နည်းစေတယ်လေ (ဟုတ်ကဲ့, သင်အမှန်တကယ်ရန်သင့်လက်မှတ်အပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးရနိုင်, ပွောဆို, Trenitalia သင်တို့အပေါ်မှာသွားလျှင် တနင်္ဂနွေ). ဒါဟာအစအခြားလူများရဲ့ရှုထောင့်ကနေအမှုအရာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံမျှဝေကြည့်ရှုရန်သင့်အားတစ်စုံတစ်ဦးကပေးသည်. ထို, နှင့် – နိုင်ငံခြားဥရောပတိုင်းပြည်တွင်အရက်မူးလာပြီ သင့်ထက်ကိုသိသောလူတို့တွင်ကျိန်းသေသည် သာ. ကောင်း၏ တစ်ကိုယ်တော်ကြောင့်လုပ်နေတာ… ကျွန်တော်မှန်သို့မဟုတျကြှနျုပျတို့မှန်?
သင့်ရဲ့ခံစားကြည့်ပါ ရထားခရီးစဉ်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကသင်၏ရထားခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုအနားယူနှင့်ကိုင်စွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေး! သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နေရာအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် saveatrain.com သေချာသည်, ဒါကြောင့် – movin 'get!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)